तीज कहिले, गीत अहिल्यै - जीवनशैली - नेपाल
तीज कहिले, गीत अहिल्यै
सके व्यापार, नसके रहर पूरा गर्ने
वर्षमा एक दिन
रिङ्दै घुम्दै आउने
तीजको रमझम... ।’
लक्ष्मी न्यौपानेले तीजको यही भाका रेकर्ड गर्दै लोकसंगीतमा पाइला राखेकी थिइन्, ०५१ मा । पहिलो गीत हिटमात्र भएन, तीज गीतको सदाबहार गायिकाका रूपमा पनि परिचित भइन् । तीजका भाकाको लोकप्रियता फराकिलो बनाएको दरिलो जस लक्ष्मीलाई नै जान्छ । तीज गीतको ११ वटा एकल एल्बम जो निकालीसकिन् । तर, यस वर्षका लागि तीज गीत रेकर्डसम्म गरेकी छैनन्, बजारमा ल्याउनु त परको कुरा !
सुनीता दुलाललाई चिनाएको तीज गीतले नै हो । ०६० मा आएको उनको पहिलो एल्बम चेलीको माइतीघरमा तीजका भाकाहरू समावेश थिए । त्यसयता वर्षेनी तीज गीतका एल्बम निकाल्छिन् । प्रायः दर्शक÷श्रोताको मुखमा झुण्डिन्छ । त्यसो नहुँदो त, विदेशमा सर्वाधिक कार्यक्रम गर्ने लोकगायिका कसरी हुन्थिन् होला र ? उनी स्वयं आफ्नो सफलताको राज तीज गीतलाई नै मान्छिन् । तर, यस वर्ष एल्बम निकाल्ने÷ननिकाल्ने दोसाँधमा छिन् । सुनिताले मसिनो स्वरमा भनिन्, “निकाल्नु त पर्ने हो । निकालिएला पनि तर अघिल्ला वर्षहरूमा झैँ उत्साही छुइनँ ।”
किन त ? लक्ष्मी र सुनीताको जवाफ एउटै छ, “तीज गीतको नाममा विकृति आयो ।” त्यो विकृति शब्द, शैली र भिडियोमा त छँदै थियो, त्यो भन्दा पिरलोचाहिँ तीज आउनुभन्दा चार महिना पहिल्यै गीत निकाल्ने होडबाजी सुरु भयो । लोकसंगीतमा विगत केही वर्षदेखि छाएको यो संक्रमणले यस वर्ष अझै गाँजेको छ ।
८ भदौमा हरितालिका तीज छ तर जेठ पहिलो साताबाटै युट्युबमा तीज भाकाको गीत अपलोड सुरु भयो । रेकर्डिङ स्टुडियोका सञ्चालकहरू भन्छन्, कति राम्रो र दिदीबहिनीको भावना जोडिएको गीत गाउने भन्दा कसले पहिला बजारमा ल्याउने होडबाजी चलेको छ । यसले स्वाभाविक रूपमा तीज भाकाको गुणस्तर र महत्व ओरालो लागिरहेको छ । “अहिले असार हो । असारे गीत पटक्कै आउँदैनन् । तर, तीजका गीतचाहिँ जेठबाटै,” लक्ष्मी दुखेसो पोख्छिन्, “संस्कृति र संस्कारलाई हेर्ने हो भने यो राम्रो होइन । किनभने तीज भाका व्यापारमात्र होइन ।”
हुन पनि, तीज गीतको रौनक पहिले कृष्ण जन्माष्टमीबाट मात्र सुरु हुन्थ्यो। दिदीबहिनीहरू वल्लोपल्लो घरमा गएर तीज भाका गुन्गुनाउँथे । साउने संक्रान्तिभन्दा अगाडि त रेडियोमा पनि तीज गीत बज्दैनथ्यो । तर, अहिलेको विडम्बना चाहिँ तीज आउने बेलासम्म तीज गीत बासी भइसक्छन्, चमक घटिसकेको हुन्छ । त्यसैले अरू जसले जे गरे पनि लक्ष्मी आफ्नो ‘लिगेसी’भन्दा बाहिर जाने मुडमा छैनन् । अर्थात् साउने संक्रान्तिपछि मात्र तीज गीत बजारमा ल्याउने तयारीमा छिन् ।
अग्रज लोक स्रष्टाहरू लोकगीत, त्यसमा पनि विशेष महŒव र हाम्रो संस्कृतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको तीज भाकालाई व्यापारको अस्त्र बनाइनुहुन्न भन्ने मान्यता राख्छन् । हो पनि । तर, बजारले गर्दा तीज गीत धेरै, तीजभन्दा अगाडि नै अनि पुराना भाव र भाकामा अलि लचिलो (कमसल ?) भएर सार्वजनिक गर्नु बाध्यता रहेको पीडा पोख्छन्, अर्का लोकगायक खुमन अधिकारी । किन यसो भनिरहेका छन् भने यस वर्षका लागि उनले २१ वटा भाका गाएका छन्, जसमध्ये १४ वटा त आफ्नै शब्द र संगीतमा ।
उनका अनुसार अरू बेला दैनिक १० लोकगीत बजारमा आउँथे भने अहिले घटीमा २० तीज गीत । यस वर्षमात्रै पाँच सयको हाराहारीमा नयाँ तीज भाका बजारमा आउँदैछन् । खुमन नढाँटी भन्छन्, “अरू बेला निकाले पनि हुन्छ । ननिकाले पनि हुन्छ । तर, तीजमा चाहिँ निकाल्नैपर्ने बाध्यता छ । नत्र आफैँ हराइएला भन्ने डर पो हुन्छ ।”
त्यो डर वा बाध्यता फेरि पनि कथित व्यावसायिकतासँग जोडिन्छ । जस्तो, तीज गीतको लहड छाउनुको मुख्य दुई कारण छन् । एक, देश÷विदेशका सांस्कृतिक कार्यक्रममा जान । अर्को, युट्युबमा भिडियो राखेर डलर झार्न । यसले स्तरीयभन्दा बिकाउ भाकाको बहाव बढाउने भइहाल्यो । सोही कारण तीज गीतलाई कमाई खाने भाँडो बनाइएको आरोप लाग्ने गर्छ । ‘चुम्म म्वाइँ खाउँला आमाको गालामा...’ की यी गायिका आक्रोश पोख्छिन्, “तीज गीतमा भावना जोडिएको हुन्न । हिट हुने र पैसा कमाउने एकोहोरो ध्याउन्न हुन्छ ।”
त्यसो त, पछिल्लो समय लोकगीतमा एकछत्र राज गरिरहेका गायक पशुपति शर्मा स्वयं तीज भाकाको लालित्य हराउँदै गएको स्वीकार्छन् । यस वर्ष १४ वटा तीज गीत गाएका पशुपति भन्छन्, “अलि भावुक र दिदीबहिनीका विरह पोखेका गीत बनाइयो भने चल्दै चल्दैन । त्यसैले सुन्दा रमाइलो लाग्ने अनि सन्देश पनि दिने गीत बनाउने गरेको छु । नत्र टिक्न मुस्किल छ ।”
आधुनिक नोट समातेर पारिवारिक र सामाजिक यथार्थलाई शब्दमा उन्न सिपालु छन् पशुपति । पशुपतितिर धेरै महिला कलाकारको ध्यान किन पनि तानिएको हो भने उनी शब्द लेख्ने, संगीत भर्ने र गाउने मात्र होइन, म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्छन् र आफैँ निर्देशन पनि गर्छन् । जसले गीतको बजेट कम हुन्छ । उनका अनुसार एउटा गीतको रेकर्डिङदेखि भिडियोसम्मको खर्च एक लाख रुपियाँको हाराहारी हुन्छ ।
तीजको याम (जेठ–भदौ) यति खर्च गर्दा उठ्ने सम्भावना अधिक हुँदोरहेछ किनभने लोक संगीतको माहौल यही बेला तात्छ रे ! फेरि लोक गायनमा रमाउन खोज्ने नवगायिकाहरू तीज भाकाबाटै आफ्नो करिअर सुरुवात गर्न चाहन्छन् । पुरुष कलाकारमा पनि ठट्यौली शैलीमा लोकभाका गाउँदा छिट्टै ‘मार्क’ हुने लालसा रहन्छ । हल्का मात्र हिट हुँदा पनि कार्यक्रमहरूमा गाउने अवसर मिल्छ ।
अरू बेला लोकगीत वृत्त सुस्ताउनु र यो बेला जुर्मुराउनुको मुख्य कारण यही हो तर दुःखद कुरा चाहिँ जति नवकलाकार तीज गीतबाट भित्रिन्छन्, तीमध्ये आधाजसो मात्र जसोतसो टिक्छन् । अधिकांश आउँछन्, जान्छन् ।
जस्तो: पोहोर खुमनले १९ गायिकाका लागि गीत कम्पोज गरेका थिए । तीमध्ये १० जना हराए । उनै खुमनले यसपटक ११ जना नयाँ महिला कलाकारका लागि गीत बनाएका छन् । उनी हाँस्दै सुनाउँछन्, “अब अर्को वर्ष उनीहरूमध्ये कति जना टिक्लान्, थाहा छैन ।” यही क्षेत्रमै भएका कति महिला कलाकार चाहिँ तीजको बेलामात्र झुल्कन्छन् ।
फेरि पशुपति र खुमनजस्ता चलेका कलाकारका लागि जेठ–असारमै गीत सार्वजनिक गर्नुको आफ्नै व्यावहारिक परिबन्द छ । किनभने उनीहरूलाई तीजको छेको त विदेशमा कार्यक्रम गर्नै भ्याइनभ्याई हुन्छ । खुमनकै कुरा गरौँ न, उनी अस्टे«लिया जाँदैछन् । त्यहाँ विभिन्न सहरमा तीज भाका घन्काएपछि दुबई पुग्नेछन् । त्यसपछि जापान र दिल्ली । सबै कार्यक्रम सकेर आउँदा तीज पनि सकिसक्छ ।
पशुपति पनि आगामी दुई महिनाका लागि ‘प्याक’ भइसके । तेजश रेग्मी, देवी घर्ती, पूर्णकला बीसी, शान्तिश्री परियार, सम्झना भण्डारीहरूको हालत पनि उही हो । त्यसैले विदेशका कार्यक्रमभन्दा अगाडि गीत/भिडियो ल्याउनैपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरू बताउँछन् ।
बाध्यता अनेक होलान्, तर बिकाउ र बेमौसमी तीज गीतको बाढी आएकोमा कुनै सन्देह रहेन । यो प्रवृत्तिले तीजमात्र होइन, समग्र लोकगीतकै छवि धुमिल्याउँदै लगेको छ । अझ गहिरिएर हेर्दा लोक गीत भनेकै तीज गीतमात्र हो भन्ने मानसिकताले जरा गाडेको छ, दर्शक-श्रोतामा मात्र होइन, कलाकारहरूमा पनि । सबै जना तीज कहिले आउला र गीत निकालौँला भनेर बसेका हुन्छन् । भाका जस्तो भए पनि तीजकै भाकाका रूपमा प्रचार गरिन्छ । पुरुष हाबी भएकाले शब्द छाडा र उत्ताउलो हुँदै गएको गायिका सुनीताको आरोप छ । भन्छिन्, “संख्यात्मक रूपमा धेरै भयो तर सुन्नलायक गीत छैनन् । वास्तविक तीज गीत ओझेलमा परेको छ । देखासिकीमा गाउने होड छ ।”